Fanidiana varavarana amin'ny tontolo iainana mando
Noho ny orana mitohy, ny haizin-drivotra dia ho avo be, ary mety ho mando tanteraka ny lafiny rehetra amin'ny trano. Amin'izao vanim-potoana izao, dia hisy fiantraikany amin'ny fampiasana ny varavarana hidin-varavarana. Satria ny kalitaon'ny fanaka hardware dia tsara na ratsy, ny iray amin'ireo fepetra dia ny fotoana fitsapana ny sira. Satria t ...
Ahoana ny fomba hanadiovana sy hitsaboana valan'aretina mandritra ny areti-mifindra
Ny valanaretina momba ny valanaretina coronavirus dia tena masiaka. Noho izany, na any an-trano na any ivelany, dia ny manasaraka ny fihanaky ny virus, ity dia fepetra lehibe iray.Hapetraka anefa, hiantohana ny ankohonana, ny fahadiovana manokana no fototry ny fanilikilihana ny fihanaky ny virus .Ahiko, hampianariko ianao hanadio ...
Ahoana no mitazona ny hidi-varavarana?
Ny hidy varavarana no zavatra matetika indrindra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Maro ny olona no mieritreritra fa raha mividy hidy ao an-trano ianao, dia tsy mila mihazona azy io mandra-pahakivy. Ny fiainam-panompoana ny hidin'ny varavarana dia azo ampitomboina betsaka amin'ny fanatanterahana ny fikojakojana amin'ny lafiny maro. 1. vatana mangatsiaka: ho ivony ...
Fitaovana fitaovan'ny Hardware, Door Knobs, Fitaovana fanaka sy kapobeny ny fanaka, Voatavo baoritra vita amin'ny bozaka vy, Hetsika famandrihana varavarana brass, Solika baoty vita amin'ny alika,